Degso Mouse Recorder loogu talagalay Windows
Degso Mouse Recorder
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (0.60 MB)
Degso Mouse Recorder,
Diiwaanka Mouse waa duubista jiirka oo horumarsan oo kuu oggolaanaya inaad duubto macros oo aad mar dambe maamusho si aad otomaatig ugu noqoto hawlo kala duwan.
Soo dejiso Diiwaanka Mouse
Diiwaanka Mouse waa barnaamij Windows ah oo cabbirkiisu yar yahay kaas oo duubi kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada jiirkaaga oo si sax ah ugu celin kara iyadoo loo eegayo goobaha isticmaalaha lagu qeexay. Barnaamijku wuxuu la yimaadaa is-dhexgal isticmaale oo aad loo habeeyay oo leh xulashooyin badan. Markaad rabto inaad duubto kalfadhi, si fudud u riix badhanka ama furaha furaha furaha ee isku -xirka. Waxaad sidaas oo kale u damin kartaa duubista kadib markaad samayso dhaqdhaqaaqyada jiirka. Waxaad ku celin kartaa oo keliya ficilka la duubay mar ama dhowr jeer. Waxa kale oo jira tiro ka mid ah xulashooyinka qaabeynta kale. Tusaale ahaan; waxaad barnaamijku ku celin kartaa ficilka dhowr daqiiqo markiiba.
Barnaamijka duubista dhaqdhaqaaqa jiirka ayaa si otomaatig ah u xira kombiyuutarka marka hawsha la dhammeeyo. Waxaad dejin kartaa waqtiga dib -u -dhaca inta u dhaxaysa laba ku -celcelin ama hagaajin kara xawaaraha si aad ugu celceliso. Waxaad ku duubi kartaa wax ka badan hal ficil barnaamijka, markaa waxaad ka dooran kartaa liiska.
Barnaamijku wuxuu la yimaadaa aalad guji jiirka. Mouse Clicker wuxuu diiwaangeliyaa falalka la midka ah ujeeddada ugu weyn ee barnaamijka. Qalabka waxaa loo habeyn karaa inuu riixo badhanka bidix, midig ama dhexe. Waxa kale oo loo qoondeyn karaa hal guji ama laba gujin.
Diiwaanka Mouse waa barnaamij fiican oo ku anfici kara markaad u baahan tahay inaad kombiyuutarka ku samayso falal soo noqnoqda.
Mouse Recorder Noocyada
Cabirka Faylka: 0.60 MB
Horumar: Robot Soft Studio
Diiwaanka Mouse waa duubista jiirka oo horumarsan oo kuu oggolaanaya inaad duubto macros oo aad mar...
Waa maxay Telegram? Telegram waa barnaamij fariin lacag laaan ah oo u taagan inuu ahaado mid aamin...
Tweetium waa macmiil Twitter ah oo loo heli karo taabashada iyo aaladaha Windows 8.1 ee caadiga ah....
Fizy waa adeeg muusig halkaas oo aad ka heli karto ugu dambayntii iyo dhammaan albumyadii...
Excel Online waa nooca bilaashka ah ee barnaamijka Microsoft Excel ee aan u isticmaalno sameynta...
Timber wuxuu keenayaa barnaamijka Windows 8 barnaamijka Tinder, oo ah barnaamij shukaansi oo ay...
Waxaan dhihi karaa Tapatalk waa codsi waxtar badan yeelan doona haddii aad tahay qof inta badan...
VKontakte waa barxad siweyn looga isticmaalo isku xirka bulshada ee Russia iyo Ukraine. Codsiga...
PowerPoint Online waa nooc fudud oo PowerPoint ah, oo qayb ka ah barnaamijka Microsoft Office....
Maxnote waa codsi qoraal ah oo aad ku isticmaali karto si raaxo leh nidaamka hawlgalka Windows....
In kasta oo Deezer uu hadheeyay Spotify, Apple Music iyo Tidal ee waddankeenna, waa codsi dhegeysi...
MixRadio waa codsi muusig oo la beddeli karo oo ay soo saartay Microsoft oo si gaar ah loogu...